Qabiyyeewwan qaaqa kanaa dirreewwan deetaa iddoo Deetaa keessaa jiranii garagara, bakka dirreewwan deetaa Tarree ykn Tarjaa qaaqa Qinxaaa keessatti argamani.
Hundamtaa xiqqaa shallaguu barbaadduu ifteessi.
Hundaamtaa xiqqaa hin shallaguu.
Hundaamtaa xiqqaa ofumaan shallaga.
dirqalaalee kana fili,itti ansuun tarree keessaa akaakuu hundaamta xiqqaa shallaguu barbaadduu cuqaasi.
Maqaa dirree deetaa filatamee tarreessa.
Qaaqa bal'isaykn xinneessa.Qaabdoon Dabala dirreewwan deetaa qofatti mul'ata.
Yoo qaaqni qabdoo Dabalatin babal'ate,wantootni armaan gadii qaaqatti dabalamu:
Tokkon tokkoo dirree deetaatif,akaakuu agarsiisaa filuu dandeessa. Akaakuuwwan murtaawoo ta'aniif hundee dirreee fi hundee wantaaf odeeffannoo dabalataa filuu dandeessa.
Bu'aawwan osoo hin jijjiramiin agarsiifaman
Bu'aa tokko tokkoo irraa, gatiin wabii isaa(kana gadi ilaali) ni hir'isama, fi garaagarummaan ni agrsiifama. Ida'amtootni hundee dirreetin alaa akka bu'aawwan duwwaatti agrsiifamu.
Yoo maqaan hundee wantaa ifteesstee,gatiin wabii dirree wantoota walitti makamanii firiin bakka wantii dirree hundee keessaa hundee wantaa ifta'een bakka bu'aamudha
Wanta duraanii ykn Wanta itti aanuu
Yoo "wanti duraanii" ykn "wanta itti aanuu" akka hundee wantaatti ifteessite,hundee dirree durduuba tartiiba qabsiisaa keessatti, gatiin wabii bu'aa miseensa hundee dirree kan itti anuun mul'atuti.
Tokko tokkoo firii gatii wabii isaatiin hiramaa.Gatiin wabii akkumaa "Garaagarumma kanarraa" tin tilmaamaama.Ida'amtoonni hundee dirree tiin alaa akkaa bu'aawwaan duwwaatti mul'atu.
% Garaagarumma kanarraa
Tokko tokkoo firiif, gatiin wabii isaa irra hir'isuudhaan isaa hir'aatee kana immoo gatii wabitiif hiruudha.Gatiin wabii akkumaa "Garaagarumma kanarraa" tin tilmaamaama.Ida'amtoonni hundee dirree tiin alaa akkaa bu'aawwaan duwwaatti mul'atu.
Waliigala kaasuu keessatti
Hundee dirree keessatti tokko tokkoon bu'aa ida'amaa bu'aawwaan wanta duraa irratti ida'amu, hundee dirree keessatti Durduubni Tartiiba Qabiinsaa, fi ida'aamni walii galaa agarsiifama.
Tokko tokkoon bu'aa argachuuf yoo fankishinii ida'amaa garaagaraa fayyadamuullee, bu'aawwaan yeroo hundaa ni ida'amu.
% tii tarree
Tokko tokkoon bu'aa, ida'amaa bu'aa taree gabatee qinxaa keessatiif hiramu.Yoo dirreewwan deetaa garagaraa jiraatan,walii galli dirree deetaaf ni fayyada.Yoo hunduumta xiqqa ida'amaa fankishinoota hujeekan filamee,walii galli ida'aan fankishinii dirree deetaa ammaas ni fayyada.
% tii tarjaa
Akkuma "% tii tarree"ti,garuu walii galli bu'aa tarjaa ni fayyada.
% tii walii galaa
Akkuma "% tii tarree"ti,garuu dabaltoo dunneettii bu'aa dirre deetaa ni fayyadama.
Dunneettiin tarjaa, tarree fi dabaltoo, akkuuma seera armaan olii hordoofun, himannoo armaan gadii shallaguuf oola.
(bu'aa kan bu'uuraa*dabaltoo duneeetti)/(tarree duneetti*tarjaa duneetti)
Title is: Dirree Deetaa